Kiisaska cusub ee Feyruska Karoona oo hoos u dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Kiisaska cusub ee Feyruska Karoona oo hoos u dhacay
Saddexdii bil ee la soo dhaafay waxa la dareemay hoos u dhac ku yimid Kiisaka cusub ee COVID-19, waxaana kordhay dadka ka soo bogsanay cudurka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoos u dhac ayaa laga dareemayaa kiisaska Feyruska Karoona, Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa warbixinteedii shalay ku sheegtay in wax kiis cusub ah aan laga helin Muqdisho, halka dalka oo dhan dadkii 48 saac ka hor la baaray laga helay 19 qof.
Xaaladaha cusub ayaa laga soo sheegay Somaliland 11, Puntland 5, Hirshabeelle 2, iyo Jubbaland oo hal ruux ah, taa oo ka dhigan in guud ahaa kiisaka COVID-19 ee dalka laga diiwaan galiyay ay gaarayaan 14,594 qof.
Sida ay sheegtay Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada, Fowsiya Abiikar Nuur, yaraanshaha xaaladaha cusub waxaa barbar socda soo kabashada bukuunkii hore, waxaana caabuqan ka caafimaaday 60 ruux taasi oo tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigeysa 6,639.
Inkastoo la aaminsanyahy in ay jiraan dad cudurkaan u geeriyooday oo aan ku jirin xisabta Dowladda Fadaraalka, ayay hadana Wasaaradda Caafimaadka dhimashada guud ku sheegtay 767 qof.
Dowladda Fadaralka Somaaliya ayaa hore u soo rogtay amaro lagu xakamaynayay COVID-19, kaas oo saameynayay goobaha wax barshada, Wasaaradaha Dowladda iyo goobaha ganacsiga ee la isugu yimaado.
Bartamihii bisihii Maarso ayay ahayd markii dalka la keenay Tallaalka cudurka Covid-19 ee ay soo wada saareen shirkadda AstraZeneca iyo Jaamacadda Oxford kaas oo la’aamin sanyahy inuu qeyb weyn ka qaatay in ay yaraadaan xaaladaha cusub ee COVIS-19.